Ukusuka kwiiCopps ukuya kwiMacks
Inqwelo yokuqala yokuqala yenziwe nge-1896 nguvulindlela wamaGermany uGollieb Daimler. Iloli likaDaimler yayineenjini ezine zokuhamba ngehashe kunye nebhetti yokuqhuba ngemigangatho emibini phambili kunye nomnye. Yayiyilori yokuqala. UDaimler naye wakhiqiza isithuthuthu sokuqala sehlabathi ngo-1885 kunye neyokuqala kweeteksi ngo-1897.
I-First Tow Truck
Icandelo lokuthunga lazalelwa ngo-1916 eChattanooga, eTennessee xa u-Ernest Holmes, uSr wancedisa umhlobo ukuba athathe imoto yakhe ngeemithi ezintathu, i-pulley, kunye nekholeji eboshwe kwisiqalo se Cadillac ye-1913.
Emva kobugcisa bakhe , uHolmes waqala ukuvelisa iimpahla kunye nezinto zokusebenza zokuthunga ezithengiswa kwiigaraji zezimoto kunye nakubani na umntu onokuthi unomdla wokubuyisela nokukhupha i-autos ephazamisekileyo okanye ekhubazekile. Isixhobo sakhe sokuqala sokuvelisa sisiza esincinci kwi-Market Street.
Ibhizinisi likaHolmes landa njengoko ishishini lorhwebo landa kwaye ekugqibeleni iimveliso zalo zathola udumo lwehlabathi lonke ngomgangatho kunye nokusebenza kwazo. U-Ernest Holmes, uSr. wafa ngo-1943 waza waphumelela ngunyana wakhe, u-Ernest Holmes, uJr., owayegijimela inkampani ade aphume umhlala-phantsi ngowe-1973. Umzukulu womsunguli, uGerald Holmes, washiya inkampani waza waqala enye eyakhe, i-Century Wreckers. Wakha indawo yakhe yokuvelisa e-Ooltewah kufuphi neTennessee kwaye ngokukhawuleza wakhankanya inkampani yangaphambili kunye nabahlaziyi be-hydraulically-powered power.
I-Miller Industries ekugqibeleni yathengisa impahla yezo zombini iinkampani, kunye nabanye abakhiqizi be-wrecker.
UMiller uye wagcina indawo ye-Century e-Ooltewah apho i-Century kunye ne-Holmes abahlaseli bebenziwa ngoku. UMiller ubuye enze abaMngciphekisi beMngeni. (Ifunyenwe inxalenye esuka kwi-press release UKUPHILA KWEMIHLABA NOKUBHALWA KWENKQUBO YOKUPHUMA NEMISEBENZI, INC.)
I-American Society of Mechanical Engineers ichaza iloli yezorhwebo njengalo "inqwelo ehambahambayo, eqhutshwa ngamandla eqhubekayo, ekhupha, ekhupha, ephakamisa, eqongeni okanye ephathekayo." Iilori zamashishini ezixhaswayo ziyaziwa ngokuba yiimfoloksi, iilori zamalente, iilori ezikhweleyo, iilori kunye neenqwelo zokuphakamisa.
I-forklift yokuqala yaqalwa ngo-1906 kwaye ayitshintshanga kakhulu ukususela ngelo xesha. Ngaphambi kokuveliswa kwalo, inkqubo yeetyunithi kunye neenqindi yayisetyenziselwa ukuphakamisa izinto ezinzima.
I-Mack Trucks, Inc. yasungulwa ngo-1900 eBrooklyn, eNew York nguJack noGus Mack. Kwakubizwa ngokuba yi-Mack Brothers Company. Urhulumente waseBrithani wathenga waza wasebenzisa umzekelo we-Mack AC ukuthutha ukutya kunye nezixhobo kwimikhosi yawo kwiMfazwe Yehlabathi I , ukufumana isiteketiso esithi "Bulldog Mack." I-bulldog igcina ikhathalogi yenkampani kuze kube namhlanje.
Ilokuqala lokuqala lori lenziwe ngo-1898 nguAlexander Winton eCleveland, eOhio. I-Winton ekuqaleni yayiyi-carmaker. Wayefuna indlela yokuthutha izithuthi zakhe kubathengi kwilizwe lonke kwaye i-semi-wayizalwe-iloli enkulu kumavili angama-18 usebenzisa i-axles ezintathu kwaye ikwazi ukuphatha imithwalo enzima, imithwalo enzima. I-axle yangaphambili ijikeleza umgca xa i-axle yangemuva kunye nevili zayo ezimbini ziqhubela phambili.
Iingcwangciso ezili-10 zokuphucula ulwalamano lwasekuhlaleni nasezikolweni